XASAASI: Wasiiro ka tirsan DFS oo fadeexad soo wajahday [AKHRISO] – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XASAASI: Wasiiro ka tirsan DFS oo fadeexad soo wajahday [AKHRISO]
Af Soomaali Somalia
Tuuryare 7 May 2018 8 May 2018
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan waxaa ay la yaaban yihiin is jiijiid u dhexeeda laba xildhibaan oo ka wada tirsan xukuumada Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirada sportiga iyo dhalinyarada iyo Xildhibaan Samra Ibraahim Cumar oo ah wasiir ku xigeenka haweenka iyo xuquuqda aadmiga ayaa ka dhex dilaacay loolan aad u adag ayaga oo isku haysta cida u dhexeysa ama xaaska u noqoneysa guddoomiyaha baarlamaanka Max’ed Mursal Sheekh.
Xildhibaanada qaar ayaa sheegaya in xildhibaanad Samra Ibraahim Cumar ay u tagi jirtay lana soo dhixi jirtay Xildhibaan Max’ed Mursan markii uu ahaa wasiirka gaashaandhiga taasoo keentay in Xildhibaan Khadiija Max’ed Diiriye aysan taageerin musharaxnimada Max’ed Mursan ee guddoomiyaha baarlamaanka oo ay taageertay xildhibaan C/casiis Laftagareen.
Xildhibaan Max’ed Mursal oo og saameynta ay Khadiija Max’ed Diiriye ku dhex leedahay xildhibaanada ayaa ka dalbaday in ay isaga taageerto. Khadija Max’ed Diiriye ayaa shuruud ugu dhigtay Max’ed Mursan in uu iska fogeeyo ama eryo xildhibaan Samra Ibraahim.
Maalintii doorashada ayaa waxaa si xoog leh usoo ifbaxay loolanka ka dhaxeeya labada xildhibaan ee haweenka ah ayadoo la arkayay marka ay Samra Ibraahim Cumar u tagto Max’ed Mursal oo fadhiga safka musharaxiinta ayna dhegta wax ugu sheegto, kana soo tagto, ay Khadiija Max’ed Diriye iyana u tageysay Max’ed Mursan oo ay dhegta wax ugu sheegeysay sida ay Samra Ibraahim sameysay taasoo ceeb ka dhex abuurtay baarlamaanka.
Xildhibaanada ayaa sheegay in xildhibaan Samra Ibraahim Cumar ay waqtiyadii dambe la daganeyd Xildhibaan Danjire Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayadoo la sheegay in ay kala tageen Maxamad Cabdullahi Mursal oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada ee koofur galbeed.
Wasiirad Khadiija Max’ed Diriye ayaa la ogsoon yahay in ay horey ugu dhaxday guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan balse aanan aqbali karin in xildhibaan Samra Ibraahim Cumar ay noqoto xaaska guddoomiyaha baarlamaanka.
Arrinkaan ayaa fadeexad iyo weji gabax u keenay guddoonka cusub ee baarlamaanka ayadoo aan la ogeyn sida ay ugu wada shaqeyn karaan golaha wasiirada dhexdooda.
Arday jajabisay iskuulo ku yaala Muqdisho kadib markii la badalay imtixaan ay qishkiisa heleen
DR Congo: Fears for Health of Detained Activist